Venus uchungechunge kuyinto kabili ukuguqulwa imvamisa high UPS inthanethi nge okukhipha amandla isici 0.8. Eziklanyelwe umsebenzi in abampofu amandla izindawo. Bona inikeza yamandla aphezulu ukuminyana nge eside isikhathi isipele ngosayizi ezihlangene. Akuve ekahle ngoba ATM, amabhange kanye nezinye ibhizinisi izicelo esibucayi. Abasebenzisi baphinde ungalungisa ukushaja wamanje kusuka 1A ukuba 6A ngokuvumelana ezahlukene applications.Venus Series futhi unama-USB kanye RS-232 nezimbobo zokuxhumana njengoba standard, ne esakhelwe slot ohlakaniphile for adapters ezengeziwe, olandelwayo converters futhi baxoxela amakhadi oxhumana nabo.
1.True kabili ukuguqulwa UPS inthanethi
Weqiniso double ukuguqulwa UPS sizonikeza ahlanzekile, izinga eliphezulu amandla izinga ukuvikela ngokuphelele kumadivayisi-esibucayi mission efana namanethiwekhi ebucayi, izikhungo ezincane ikhompyutha, amaseva, izicelo Telecom, kanye izicelo ezimbonini.
2. lokukhipha amandla isici 0.8
Ngokuqhathaniswa UPS inthanethi emakethe wamanje, Venus uchungechunge UPS inikeza kangcono amandla okukhipha isici kuze kufinyelele 0.8. It linikeza ukusebenza ephakeme kanye effciency izinhlelo zokusebenza ezibucayi.
3. Wide okokufaka voltage range (110V-300V)
Venus uchungechunge usengakwazi ukunikeza amandla saka amadivayisi axhunyiwe ngaphansi engazinzile amandla ezindaweni.
5. ECO imodi wokusebenza kwagezi
Ukunikezwa kahle njengoba eliphezulu 97% ukusika amandla ukusetshenziswa & izindleko. UPS amandla isicelo nge dlula static, ngesikhathi esifanele ibuyele ku ukuguqulwa intanethi double uma kunesidingo.
6.Emergency Amandla Off (EPO) Umsebenzi
7.USB + RS232 + RJ45 + SNMP, zokuxhumana amaningi ngoba 1-3K onobuhle
Lesi sici sivumela noma USB, RS232 noma RJ45 zokuxhumana port ukusebenza SNMP esibonakalayo kanyekanye.
• UPS kungenziwa exhunywe kwi-computer nge-USB noma Rs232 esibonakalayo. Ngakho-ke kungenziwa igcwaliseke LAN ukuqapha amasethi olulodwa noma eziningi UPS, liphinde kungaba ukuqapha ezinye ups okuyinto exhunywe kwi-computer nge-LAN.
• softwe UPS seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-10 izinhlobo ulimi okukhethayo.
• humanized operation esibonakalayo, okuyinto enamandla futhi can libonisa voltage battery, imvamisa, umthwalo, izinga lokushisa kanye nenye idatha real-time nokuqapha ngokusebenzisa amashadi.
• I-alamu isigameko ezahlukene amandla singakhululwa ngomsakazo, imilayezo yombhalo weselula, e-mail kanye SNMP njll
Usayizi, DXWXH (mm)
Okuphansi Line Dlulisa
Okuphansi Line Comeback
Line High Dlulisa
isigaba Single emhlabathini
≧ 0.99 @ okuzisholo voltage (voltage okokufaka)
50 Hz ± 0.25 Hz noma 60Hz ± 0.3 Hz
105% ~ 110%: UPS amvalele phansi ngemva 10 imiz ngesikhathi imodi noma ukudlulisa ibhethri ukundlula lapho Umbuso kungokwemvelo
110% ~ 130%: UPS amvalele phansi ngemva 1min ngesikhathi imodi noma ukudlulisa ibhethri ukundlula lapho Umbuso kungokwemvelo
> 130%: UPS amvalele phansi ngemva 3seconds ngesikhathi imodi noma ukudlulisa ibhethri ukundlula lapho Umbuso kungokwemvelo
≦ 3% THD (Linear Layisha); ≦ 5% THD (Layisha Non-eqondile)
20-90% RH @ 0- 40 ° C (non-ushintsha uba yileli)
Ngaphansi kuka 50dBA @ 1 Imitha
Idatha Processing Centre
Izinsiza kusebenza Medical
Previous: 6-10KVA High Frequency UPS (1: 1) esilandelayo:1-20KVA okuphansi Frequency UPS (1: 1)
1-3KVA High Frequency UPS Nge esakhelwe ngaphakathi Ibhethri ...